Dilal Xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Dilal Xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho
Dilal Xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho
June 14, 2018 June 14, 2018 admin857
Mid ka mid ah Ergadii Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya soo xushay koofur Galbeed ayaa xalay fiidkii lagu dilay degmada Dharkeyneley ee gobolka Banaadir, sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka.
Ninkan oo lagu magacaabi jiray Xasan Cali Ibraahim (Gaadaay) ayaa waxaa dilkiisa ka dambeeyay rag bastoolado ku hubeysnaa, kuwaasi oo qeybta sare ee jirkiisa ka toogtay, kadibna goobta ka baxsaday.
Marxuumka oo la dilay xilli uu ka soo baxay salaada Taraaxwiixda ayaa wuxuu dilkiisa si gaar ah uga dhacay xaafada Buullada ee ku toola Suuq Boocle korkiisa.
Sidoo kale Guddoomiye Waaxeed ka tirsanaa Maamulka Degmada Hawlwadaag ee Gobolka Banaadir, ayaa xalay fiidkii waxaa lagu dilay xaafada Shanta Geed ee degmadaasi, kadib markii ay rasaas huwiyeen niman bistoolado ku hubeysnaa.
Inta lagu guda jiray Bisha Ramadaan ayaa waxaa kordhay dilalka ka dhaca Magaalada Muqdisho, Waxaan dilalkaan Badankood ka dhaceen degmooyinka Howlwadaag, Yaaqshiid, Wadajir, Dharkeynleyd , Warta Nabadda, Heliwaa iyo Waaberi.
Madaxweyne Xaaf oo Dusmareeb ka dhagax-dhigay 3 Xarumood (Sawirro)
Abwaan Baarleex Oo Loo Qaaday Caafimaad Dibadda Ah (Sawirro)
C/Wali Gaas oo magacaabay Taliyaha Booliska Puntland